JS-104 Compound polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (reducingdị mbenata mmiri) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Gaoqiang
JS-104 bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị kachasị ọhụrụ na nyocha na ngwaahịa, na-eji ọhụụ ọhụrụ polyether isii carbon monomer. Typedị ngwaahịa a nwere ọnụego mbelata mmiri dị elu, nke dị elu karịa JS-103, ma nwee arụmọrụ nchekwa slump dị elu. Ọ dabara adaba maka gburugburu ya na ihe ndị dara ogbenye ma ọ bụ oge okpomọkụ nwere oke okpomọkụ. E jiri ya tụnyere mmanya polycarboxylic acid dị na ahịa, ọ nwere ike belata oriri nke mmanya na-egbu mmiri site na 20% -40% .Ọ na-ejikarị eme ihe dị elu na nnukwu ihe achọrọ, yana ngwaahịa ya na-ejikarị eme ihe ụgbọ okporo ígwè ọsọ na ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị elu, hydropower na nnukwu ọrụ injinia ndị ọzọ na-agbapụta ihe, nnukwu mmiri na-arụ ọrụ onwe ya, nnukwu ike na nnukwu arụmọrụ na azụmahịa.
1.Ọ nwere a elu mmiri Mbelata ọnụego na a elu slump nchedo arụmọrụ, karịsịa maka ihe na oké ọnwụ na oge.
2.High mmiri Mbelata ọnụego na ala dispersion ọsọ.
3.The keukwu na-eri arụmọrụ dị elu, karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na okpomọkụ, elu okpomọkụ gburugburu ebe obibi.
slump retaining uru (30min）
slump retaining uru（60min）
1.This ngwaahịa a colorless ma ọ bụ ìhè odo mmiri mmiri. Ngwadogwu a na-atụ aro ka dị n'okpuru: n'ozuzu, a na-eji 10% -40% nke mmanya mmanya na-agwakọta obere ihe ndị ọzọ iji mee ka mmiri na-ebelata mmiri. .
Nke gara aga: JS -103 Polycarboxylate superplasticizer 50% (High Water mbenata ụdị)
Osote: BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (High slump retaining ụdị)